Kubalulekile bahlele ikhasi lesihloko business plan ngendlela efanele futhi ngokuhambisana namazinga. Kulokhu, it kwandisa amathuba ukwamukelwa wemali phrojekthi.
Yini odinga ukuyazi lapho wenza isembozo ishidi
Proper design dokumet evumela umuntu ukuba azethembe emkhakheni wezomthetho. Amazinga sokulungiselela yabo, imininingwane edingekayo nezinye imicikilisho zenzelwe ukuhlela bese lula ukubambisana phakathi kwezinhlangano. Abameli sengqondo ngikhetha ekukhishweni izivumelwano - lokhu akukona bethanda kodwa isimo sengqondo sina.
Cabangela isibonelo esilandelayo, lapho amaqembu amabili bangena esivumelwaneni futhi omunye wabo ngokusebenzisa isikhathi kwephula imigomo yesivumelwano. Omunye party uhambisa kwenye inkantolo, futhi ngesikhathi ekuqhutshweni kuvela ukuthi isivumelwano nokubambisana yakhelwe ngokungalungile, ngakho-ke, ayivumelekile. iphutha enjalo ingabangela sina kuthinte isinqumo secala, ngisho izinkampani ungeke uzithole usuwile.
Kodwa ukunemba nokunemba ukucutshungulwa kwemibhalo ayadingeka hhayi nje ngobe kutawutfutfukisa enkantolo. Umuntu ofuna ukuqala ibhizinisi, akukwazi esikhwameni salo, ngakho uyala ukuba zisebenze ibhange zimali abazimele noma emsebenzini womphakathi somxhaso ukuqala ibhizinisi. Kuleli qophelo kufika isidingo ukudweba icebo lebhizinisi.
Sifisa osomabhizinisi, kancane ezihlobene business plan, enze iphutha. Ekuqaleni, ukwenza lokhu phrojekthi, umuntu Ziveza nokuningi babegcina afaneleke izigaba yentuthuko kwebhizinisi. Kuzothatha ku-akhawunti amaphuzu engase yeqiwe. Okwesibili, ukuklanywa business plan kungathinta isinqumo yilowo otshale izimali. Ikhasi Isihloko ubuso idokhumenti, futhi kumele kwenziwe ngokuvumelana nemithetho. ababolekisi Abazama ngeke ngisho ukubukela isethulo, uma konke kwenziwa kanjani.
Ukubukeka kanye ikhasi lesihloko izimfanelo kuthiwa zilandele izilinganiso ezithile, okuvumela ukuba uchithe isikhathi on ukuthuthukisa design.
Yini okufanele ibe ekhasini lokuqala
Ikhasi isihloko business plan - yekhasi ebalulekile ofuna ukudweba kahle, emagugu elimnandi. Njengoba Bathi, ungeke ube ithuba lesibili lokwenza ukucindezela kokuqala. Ishidi akufanele ugcwale imininingwane.
Into esemqoka ukuthi ekhasini lokuqala kwaba igama inkampani noma umkhiqizo. Ngisho noma uhlelo lwebhizinisi ukuhluleka ke igama elifanele uyakwazi ukudonsa wonke umsebenzi. Igama kumele zivuse imizwelo ezimnandi, nesandla ukubonakaliswa isithakazelo kusuka abathengi kanye zimali.
Ikhasi isihloko business plan inikeza zimali ukufingqwa iphrojekthi. Ukuqaphela amazinga namasiko design, umlobi uqalisa kwandisa amathuba okuthi abatshali zimali. ukulungiselela abanganaki kwesembozo ishidi inomphumela omubi ngomphumela isethulo, njengoba isihlobo imfundamakhwela usomabhizinisi imininingwane bayokwahlulelwa kuso indlela ngokuvamile asihlobene. Bathi izwe nokwelukiweyo ngezinto ezincane. Kuyiqiniso, njengoba nje nosomabhizinisi imfundamakhwela kungaba e efanayo ngendlela abayitoho ukwelapha namanye amadokhumenti okusongelayo ingabikho imiphumela emibi.
Isichasiso isihloko litas
Yini okufanele zihlanganisa ikhasi isihloko business plan:
Igama iphrojekthi noma inkampani.
Qiniseka ukuthi ucacise ifomu lwenhlangano wezomthetho inkampani.
Xhumana abalobi yephrojekthi abantu abaphethe: igama, isikhundla, inombolo yocingo, ikheli le-imeyili.
Igama drafters idokhumenti ekhombisa ifoni.
Ekhelini le dokhumenti - Igama Full of yilowo owathuma nokuqhuba ibhizinisi.
Usuku kulungiselelwa idokhumenti, kanye usuku kwaqala umsebenzi.
Indawo Lokudabuka nosuku. Ngokwesibonelo, "Kaliningrad 2016"
Lena uhlu oluphelele lwazo zonke izimfanelo ukuthi kumele ibe ikhasi lesihloko business plan. Isibonelo kungabonwa esithombeni ngezansi.
A ihluzekile kubhizinisi kuzokhulisa amathuba sokuvunywa abatshalizimali phrojekthi.
Indlela yokuvula i-salon ubuhle
Ukuqinisa izinwele zezinwele kuzokwenza izinwele zakho zingenakunyakaziswa.